Qolyaha garabka bidix ee dalka Giriiga oo doonaya dowlad wadaag ah iyo muran ka taagan qorshaah gunti-giijiska. – Radio Daljir
athens , May 08 -Hogaamiyaha xisbiga garabka bidix ee fog dalka Giriiga ayaa isku dayaya in uu soo dhiso dowlad wadaag ah, kaddib markii axsaabta xukuumaddii wadaaga ahayd ee dalkaasi ee taageeraysay qorshaha gunti-giijiska ee caalamiga ah ayaa ku guuldarraystay in ay sameeyaan xukuumad wadaag ah.
Hogaamiyahani qolyaha bidixda fog ee Alexis Tsipras ayaa isagu doonayo in uu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ka hor jeeda qorshaha gunti-giijsika ,laakiin dadka wax taxliiliya ayaa sheegaya in iskudaygiisani aanu guulaysan doonin madaama aanu haysan tiradii loo baahnaa.
Cod-bixiyayaasha dalalka Greece, France iyo Talyaaniga ayaa si weyn ugu codeeyey asbuucan murashaxiinta ka horjeeda qorshaah gunti-giijiska , inkastoo digniin ay ka immanayso wadamada aagga Eurozone, gaar hogaamiyaha dalka Germany haweeneyda Angela Merkel ayaa sheegtay in dhamaan heshiishyadii qorshayaasha gunti-giijiska aan laga wada hadlikarin.
Natiijadii codbixintii baarlamanka Giriiga
99.9% codadka la dhiibtay
Magaca xisbiga : Inta uu xisbigu helay Kuraasta
New Democracy 18.85%
Murashaxiinta xorta ah 10.6% 33
KKE (shuuciga ) 8.48% 26
Ka qaybgalka doorashadu waxa uu ahaa	65.09%
Source: wasaaradda arrimaha gudaha ee Giriiga
Labada xisbi ee maamulayey dalkaasi Giriiga ee taageersan qorshaha gunti-giijiska ayaa doorashadii baarlamanka ee dalkaasi ee axaddii ku dhumiyey aqlabiyadii ay ku haysteen baarlamanka dalkaasi.
Xisbiga bidix-dhexe ee Pasok iyo xisbiga kale ee midig-dhexe ee New Democracy ayaa tan iyo bishii November ee sanadkii hore ku jiray xukuumad wadaag ah.